Buraannews.com » Wasaaradda Maaliyadda Galmudug oo Ka Digtay isticmaalka Lacagaha Been Abuurka ah
Dhageyso:Saddex qof oo kamid ah dadka ka shaqeysta sancada biraha Garowe ayaa dhaawacyo fududi kasoo gaareen qarax ka dhashay walxo biro ah oo ay farsameynyeen. Dhageyso: Dowladda Puntland ayaa dib u Dhigtay qabsoomida xilliga doorashooyinka dowladda hoose. Ururada siyaasada Puntland oo xafiisyo furanaya Dhageyso: madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Farataag” Dowladdu iyada ayaa diiday sharcigii lagu dhisay iyada ayayna u taalaa, Dhageyso:Wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo maanta sagootisay dhaqaatiir loo dirayo talaalka 4 malyan oo xoolaha Puntland ah . SOMALI LINKS
Wasaaradda Maaliyadda Galmudug oo Ka Digtay isticmaalka Lacagaha Been Abuurka ah
December 6, 2012 - Written by reporter4 - Edited byreporter4 Agaasimaha guud ee Wasaarada Maalyadda Galmudug Bile Diini Cali ayaa Maanta Saxaafada la hadlay wuxuuna sheegay in ay dhamaan ganacsatada iyo Bulshada Galmudug uga digayaan qaadashada Lacago uu ku tilmaamay in ay yihiin Been abuur .
Bile Diini Cali Agaasimaha Wasaarada Maalyada ayaa dhanka kale ka Hadlay in wixii hada ka Denbeeyay aysan u dul qaadanayn in la isticmaalo lag faalso ah ayna ka hortagisteda iska kaashan doonan Ciidamada Buliiska Galmudug iyo Wasaarada Maalyada Galmudug Cidii lagu arko iyadoo isticmaalaysa laga qaadi doono talaabo cad Maadama ay abuurayso Sicir barar ku yimaada ganacsiga .
Dhanka kale wuxuu agaasimuhu fariin u diray Dhamaan ganacsatada iyo sarif layaasha ka ganacsada isku badalka lacagaha qalaad iyo Shilin Somaliga wuxuuna ka codsaday in ay ka fogaadan wax yaabaha u keeni kara in Xoolahoda xalaasha ah aysan ku Badal xaaran maadam ay Lacagtan tahay xaashi Rinji la mariyay oo faalsa ah.
Hadalkan ka soo yeeray Wasaarada Maalyada Galmudug ayaa ah markii ugu horaysay ee ay ka hadlaan Masuuliyinta Maamulka Galmudug iyadoo Dhawaanahan ay ka Digayeen Maamulka Puntland qadashada Lacagahan balse hada ay ku dhaqaaqen maamulka Galmudug sidii looga hor tagi lahaa Lacagaha faalsada ah ee suuqyada Magaalada Galkacyo ku soo qulqulaya Comments are closed.